Antony 5 Ny Kristiana tsirairay dia tsy maintsy mitory filazantsara. HEVITRA VAVAKA
Home Fiainana araka an'Andriamanitra Antony 5 Ny Kristiana tsirairay dia tsy maintsy mitory filazantsara
Androany isika dia hiatrika ny antony 5 tokony hanaovan'ny kristiana evanjelika fitoriana filazantsara rehetra. Ny Evanjelisitra dia tsy toy ny taloha. Fiangonana maro no nanararaotra ny hafatr'i fanambinana fa ny toerana anendrena antsika voalohany ho mpino dia avela tsy hisy intsony. Mila miverina amin'ny toerana nanendrena antsika voalohany amin'ny maha-Fiangonana antsika sy amin'ny maha-mpiambina antsika isika. Ny hafatr'i Kristy dia mila miparitaka amin'ny faritra lalina sy farany eto an-tany.
Ny bokin'i Matio 28: 19-20 koa mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ataovy batemy amin'ny anaran'ny Ray sy amin'ny Zanaka ary amin'ny Fanahy Masina, mampianara azy hitandrina izay rehetra nandidiako anao; ary, indro, Izaho momba anao mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao. " Io no iraka lehibe nomen'i Jesosy fony izy hiakatra any an-danitra. Nilaza izy fa tokony handeha amin'izao tontolo izao isika ary hanao mpianatra ny firenena rehetra, dia tokony hatao batisa amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary ny fanahy masina izy ireo. Izany no iraka lehibe nomen'i Kristy Jesosy.
Na izany aza, mpino sy fiangonana maro no nivily lalana tamin'ity komisiona ity. Ny toriteny momba ny fanambinana dia nihoatra ny fitoriana filazantsara. Ny fitoriana filazantsara dia tokony horaisina ho lohalaharana ao amin'ireo fiangonantsika. Ny fiangonana sy ny isam-batan'olona dia tsy maintsy mitory ny vaovao tsara ary manatona ny olona. Ny famonjena dia tsy natao hotehirizina fa tokony haparitaka. Tsy tonga ho an'ny olona voavonjy i Kristy, ho an'ireo tsy voavonjy ny iraka nampanaovina azy.
Inona avy ireo antony tokony hanaovana laharam-pahamehana ny fitoriana filazantsara any amin'ny fiangonantsika sy ny Kristiana rehetra? Andao hasongadino haingana ny antony dimy tokony hanaovan'ny kristiana fitoriana filazantsara rehetra.
Didin'i Kristy Jesosy io
Matio 28: 19-20 koa mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ataovy batemy amin'ny anaran'ny Ray sy amin'ny Zanaka ary amin'ny Fanahy Masina, mampianara azy hitandrina izay rehetra nandidiako anao; ary, indro, Izaho momba anao mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao. "
Io no Iraka lehibe izay notendren'i Kristy Jesosy. Nolazainy tamin'ny apôstôly sy izay rehetra nanatri-maso ny fiakarany tany an-danitra fa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany, noho izany isika dia tokony hiditra amin'ny firenena rehetra ary hanao mpianatra, tokony hataontsika Batisa amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary fanahy masina . Ary tokony hampianarintsika izy ireo hitandrina izay rehetra nandidiany antsika hataontsika.
Ny iraka nampanaovin'i Kristy dia tsy azo tanterahina tao anatin'ny roa taona nanompoany, izany no nanomezan'i Kristy torolàlana an'ireo izay nahazo ny famonjena handeha any ivelany ary hampiely ny vaovao tsara amin'ny olon-kafa. Antony iray lehibe tsy maintsy hitoriantsika ny filazantsara satria didy nomen'i Kristy Jesosy antsika izany. Raha ny momba ny Evanjelika no resahina dia tsy manana safidy isika fa voatery izany, tsy maintsy ataon'ny mpino tsirairay izany.
Noho ny fahafatesan'i Kristy
Ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Jaona 3:16 Fa Andriamanitra dia tia an'izao tontolo izao ka nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny iraka nampanaovin'i Kristy Jesosy dia tsy natao ho an'ny olom-bitsy na vondron'olona manokana fotsiny. Asa fitoriana manerantany. Maty ho an'ny olona rehetra izy ary ny fahafatesany dia nanokatra fanekena vaovao ho an'ny zanak'olombelona.
Raha ny tena izy dia tokony hiparitaka any ivelany io vaovao tsara io. Ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra dia tsy maintsy mahalala sy mandre momba izany. Ny vohitra rehetra, ny tanàna kely rehetra dia tsy maintsy mahatakatra hoe iza i Kristy ary tokony hahafahan'izy ireo mamela ny fanekena ny fiainana mandrakizay amin'ny alalàn'i Jesosy. Andriamanitra tsy maniry ny fahafatesan'ny mpanota fa ny fibebahana amin'ny alalàn'i Kristy Jesosy. Fa ahoana no hahafantaran'ny olona an'io, nefa tsy mahalala an'i Jesosy akory izy ireo. Izany dia manazava ny antony maha-zava-dehibe ny evanjelistra ho antsika mpino.
Satria Jesosy no làlana sy fahamarinana ary fahazavana
Jaona 14: 6 Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako.
Na firy taona na firy taona no lanintsika etỳ an-tany, dia lava kokoa ny fiainana any an-dafy. Izany dia manazava ny antony tsy maintsy hanaovan'ny lehilahy iray izay rehetra ilaina mba hahazoana toerana ao amin'ny paradisa. Mandritra izany fotoana izany, tsy misy ny asa tsara ataontsika afaka manome toerana antsika amin'ny fanjakan'ny ray. Ny soratra masina dia nilaza fa Jesosy irery ihany no lalana mankany amin'ny ray, tsy misy olona mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alàlan'i Kristy.
Na iza na iza tsy maintsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana dia tokony hanaiky fa i Kristy no tompony sy mpamonjy. Amin'izay ihany no misy olona afaka mahita an'Andriamanitra. Ny adiresy dia eto amintsika amin'ny maha mpanelanelana antsika mba hahazoana antoka fa fantatry ny olon-kafa io fahamarinana io mba hahavoavonjy azy ireo ihany koa.
Mitombo tsara ao amin'i Kristy isika rehefa mitory ny filazantsara
Rehefa mitory ny filazantsara amin'ny maha-mpiorina antsika isika dia mihalehibe ao amin'i Kristy. Arakaraky ny fiezahantsika mampiseho ny olona hafa hoe iza i Kristy, ny fahatakarana sy ny fanambarana tsara kokoa azontsika momba an'i Kristy. Ny fitomboantsika amin'ny maha-Kristiana dia miankina amin'ny habetsaky ny fanahy hampiova finoana antsika any an-danitra. Mahazo fahalalana sy fahitana lalina kokoa avy amin'Andriamanitra isika rehefa mivoaka hitory filazantsara amin'ny olon-kafa. Ary satria manao ny raharahan'Andriamanitra isika, dia tsy hamela ny asa aman-draharaha ataon'ny ray.
Satria tia hafa isika toa ny nandidian'i Kristy
Matio 22:36 Mpampianatra ô, inona ny didy lehibe ao amin'ny lalàna? ” Ary hoy Jesosy taminy: 'Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra (Deo. XNUMX. Izany no didy lehibe sady voalohany.
Satria nandidy antsika i Kristy mba hitia ny mpiara-belona amintsika toa ny tenantsika. Tsy maintsy miezaka mitory ny vaovao tsaran'i Kristy amin'izy ireo isika satria irintsika ho voavonjy. Tahaka ny nandraisantsika ny fanomezana maimaim-poana ho an'ny famonjena, dia toy izany koa no tokony hanomezantsika azy io maimaimpoana amin'ny hafa. Rehefa voavonjy isika, dia fanahy maro no miandrandra antsika ho voavonjy, ka tsy azontsika atao ny mamela azy ireo tsy hahita. Tsy maintsy mitory filazantsara isika, tsy maintsy manaparitaka ny filazantsara.
Previous lahatsoratraAndinin-Baiboly 10 Tsy tokony hohadinoinao rehefa mivavaka mba hahazoana famelan-keloka
Next lahatsoratraAndinin-Baiboly 10 Tsy tokony hohadinoinao rehefa marary ianao
50 Ireo toerana tokony hivavaka amin'ny fivoriana amin'ny vavaka
Zava-bavaka 30 momba ny olona mampangina
Vavaka fisaorana amin'ny fahombiazana aorian'ny fizahana asa
Teboka vavaka ho an'ny fanahin'ny famelan-keloka